सालको पातमा अभिनय गर्न चर्चित नायिकाहरुले मानेका थिएनन् | NepalDut
सालको पातमा अभिनय गर्न चर्चित नायिकाहरुले मानेका थिएनन्
नेपाली लोकगीत संगितको पारखी नहुने सायद नेपालीहरु कमै छन् । तर पछिल्लो समय पश्चिमी शैलीका गीतहरु पनि नेपाली गीत संगितमा हाबी भईरहेका छन् । हुन त गीत संगित र कलाको कुनै भाषा धर्म ,सिमाना हुँदैन यो आफैमा एक पुजा हो । तथापी यस्ता गीतहरुको गाउँदै रमाउँदै हिड्ने दर्शक तथा श्रोताहरुले निकै गुनगुनाएको र नाचेको गीत सालको पात टपरी ।
कुलेन्द्र विश्वकर्मा र बिष्णु माझीको आवाजमा रहेको यो गीतले युट्युवमा समेत २ करोड भन्दा बढि भ्युअर्स पाईसकेको छ । बालबालिकादेखि बृद्धबृद्धाले समेत निकै रुचाएको यस गीतमा नवराज पन्तको शब्द र बसन्त थापाको लय संकलन रहेको छ ।
कुलेन्द्र नेपाली लोक संगितको क्षेत्रमा आफै चर्चित नाम हो तर सालको पात टपरीले त झनै उनलाई चर्चाको शिखरमा पु¥यायो भने म्युजिक भिडियोले पनि खुबै चर्चा र लोकप्रियता पायो । भिडियोमा नायिका मरिष्का पोखेरलको अभिनय रहेको छ । कुलेन्द्रका अनुसार भिडियोमा नायिकाको खोजी गर्न निकै सकस भएको थियो । कुलेन्द्रका अनुसार गीतका लागि प्रियंका कार्की , बर्षा राउत , बर्षा सिवाकोटीलाई पनि अफर गरिएको थियो । सुरुमा यस भिडियोमा नायिका प्रियंका कार्कीलाई अफर गरिएको थियो तर उनले रिजेक्ट गरेको कुलेन्द्रले बताए ।
कुलेन्द्रले भने “प्रियंकाले हेपेर नै अफर रिजेक्ट गरेको बताए । उनले भने प्रियंकाजीले एक हप्तासम्म ‘पख्नुस्, पख्नुस्’ भन्दै गीत होल्ड गर्नुभएछ । अनि, अन्तिममा आएर ‘मलाई गीत मन परेन’ भन्ने जवाफ दिनुभएछ । हुन त उहाँले हेपेरै रिजेक्ट गरेको भन्ने कुरा आ’को थियो । तैपनि म यस्तो कुरा मिडियामा ल्याउन चाहन्नँ, त्यसैले नल्याएको हो । अरु वर्षा राउत, वर्षा शिवाकोटीहरुलाई पनि अफर गरेको थियो रे ! अस्ति दीपकराज गिरीले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी बाँचिरहेकै लोकगीतका कारण हो ।”
“अहिले प्रियंका, वर्षाजी लगायत जतिले पनि नाचिरहेका हिट गीत छन्, ती सबै लोकगीत होइनन् ? मैले र विष्णु माझीले गाउने हो भने त्यो लोक भइदिन्छ तर फिल्ममा राखेको भएर सायद प्रियंकाजीहरुलाई त्यो अर्कै लाग्छ । अनि हामीले मरिष्का पोखरेललाई राखेका हौँ । उहाँ एकदमै ट्यालेन्ट र शालिन कलाकार लाग्यो । के काम गर्ने, के काम नगर्ने त्यो छान्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । यो दोहोरी भनेर हेप्ने मानसिकता फिल्मका कलाकारले हटाइदिए हुन्थ्यो । अहिले फिल्ममा चम्किनुभएका राजनराज शिवाकोटी मेरो साथी हो “।
“उहाँले बनाएका गीतहरु ती सब दोहोरी गीत होइनन् रु उहाँ दोहोरी बनाउँदाबनाउँदा हार खाएर त्यता जानुभएको हो । उहाँका थुप्रै गीत विष्णु माझी र राजु परियारले गाउनुभाको छ । त्यसैले म अनुरोध गर्छु, ‘आफू फिल्मका कलाकार भएँ भन्दैमा अरुसँग हात मिलाउन पनि गाह्रो मान्नु भएन । यो प्रवृत्ति ठीक होइन ।’ आखिर विदेश जाँदा धेरै फिल्मका कलाकार लास्टाँमा दर्शक र आयोजकको मागअनुसार नाच्ने त दोहोरी गीतमै हो । तर दुःख त कतिखेर लाग्छ भने उहाँहरु एयरपोर्ट पुगेपछि फेरि हाम्लाई चिन्नुहुन्न ।”
जे होस प्रियंकाले मन नपराएको गीत सुपरहिट भयो यसमा भने उनलाई न्याउरी मारी पछुतो भएकै होला तर फिल्मले नदिएको लोकप्रियता भने नायिका मरिष्कालाई यही गीतले दिएको छ ।